Qaabkee u dhacay dilkii Huchalu?! (Booliiska Addis Ababa oo faahfaahiyey) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Qaabkee u dhacay dilkii Huchalu?! (Booliiska Addis Ababa oo faahfaahiyey)
Qaabkee u dhacay dilkii Huchalu?! (Booliiska Addis Ababa oo faahfaahiyey)
(Addis Ababa) 30 Juun 2020 – Booliiska Addis Ababa ayaa war cusub kasoo saaray sida uu u dhacay dilkii khaarajiska ahaa ee Fannaankii Hachalu Hundessa.
Taliyaha Boliiska Addis Ababa, Endeshaw Tasew, ayaa sheegay in baaritaan hor dhac ah oo ay sameeyeen uu muujinayo in Fannaanka lagu dhex toogtey gaarigiisa.
Sida uu Booliisku sheegayo, Fannaanka ayaa gaarigiisa kasoo baxay isaga oo dibedda in yar taagnaa kaddibna ku laabtay, deeto dadka dili doona ayaa gaariga uga daba galay, halkaasoo ay dhowr xabbo ku dhufteen.
“Wuxuu ahaa dil si heer sare ah looga soo shaqeeyey.” ayuu yiri Taliyaha Tasew oo sheegay inay hayaan dhowr la tuhunsane.
Previous articleHALIS CUSUB: Shiinaha oo laga helay FAYRUS nooc cusub ah oo caalamka ku faafi kara!
Next articleDAAWO: Cali M Geeddi oo weerar ku qaaday Faroole, Jurille & ragga ”yac” dhihi waayey